Ny Governemanta Ejipsiana sy ny fanagadrana mpikatroka aterineto · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Janoary 2019 19:56 GMT
Antony maro sy tranga maro no nanampy tamin'ny firongatry ny haino aman-jery elektronika tany Ejipta. Ohatra, fanakorontanana ireo fampahalalam-baovao isan-karazany, toy ny gazety, fahitalavitra sy onjam-peo, ireo dingana sarotra amin'ny fananganana orinasa fampitam-baovao, fanivànana votoaty amin'ny fampitam-baovao alohan'ny famoahana, ireo karazana endrika famaizana mikendry mpanao gazety, sy ny hakelin'ny fahalalahana ary antony maro hafa.
Na dia eo aza ny fikasana hatrany hifehy ny fampitam-baovao ivelan'ny aterineto any Ejipta, tsy nieritreritra ny fitomboan'ny haino aman-jery elektronika ny governemanta Ejiptiana ary tsy naminavina izy ireo fa mety ho azon'ny olom-pirenena Ejipsiana ampiasaina izany. Ary azo antoka fa tsy vonona ny hiatrika ireo fitaovana ireo ny governemanta mandra-pahatongan'ny tanora mpikatroka, indrindra ny bilaogera nanomboka niresaka momba ireo karazana fanararaotana rehetra, fanagadrana, famaizana sy fampijaliana ao amin'ny bilaogin'izy ireo manokana sy ny kaonty twitter, fanentanana momba ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona ataon'ny governemanta Ejipsiana, sy manao adihevitra be sy manintona ny sain'ny fiarahamonina iraisam-pirenena.
Noho izany, dia nanomboka nanitatra ny famoretana ataony tsy ho an'ireo mpikatroka fiarahamonim-pirenena ihany, fa tamin'ireo mpikatroka antserasera amin'ny alalan'ny fikendrena ireo bilaogera ny governemanta.
Hatramin'izao, dia mbola tsy nanivana na nanimba mazava bilaogy Ejipsiana ny governemanta, fa nisambotra bilaogera marobe noho ny fikatrohan'izy ireo antserasera. Ireto manaraka ireto no ohatra sasany amin'ireo olona voasambotra noho ny hetsika antseraseran'izy ireo:
Mus'ad Abu Fagr, bilaogera – 2007.
Karim El Beheiry, bilaogera – 2008.
Esraa Abdel Fatah, hetsika 6 Aprily – 2008.
Ahmed Maher, hetsika 6 Aprily – 2008.
Mohamed Adel, bilaogera – 2008.
Diaa Gad, bilaogera – 2009.
Manamafy ny adiny amin'ireo mpikatroka antserasera ihany koa ny governemanta Ejipsiana amin'ny fisamborana ireo bilaogera Ejipsiana ao amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenen'i Cairo tahaka ny nitranga tamin'ireo bilaogera Abdel Rahman Ayyash sy Magdy Saad izay notanana nandritra ny enina andro tao amin'ny seranam-piaramanidin'a iraisam-pirenen'i Cairo. Indraindray alain'ireo mpitandro filaminana an-keriny koa ny fitaovana manokana an'ireo bilaogera, tahaka ny nihatra tamin'ilay bilaogera Wael Abbas (30 Jona 2009) raha nalain'ny polisy ny solosaina findainy.
Tsara homarihana fa nanadihady ny fisamborana sy ny fanorisorenan'ireo mpisera aterineto miisa 43 tamin'ny taona 2008 ny tatitra navoakan'iny fikambanana tsy miankina Ejipsiana Hisham Mubarak Center for Law (HMCL) .
Miharihary fa miezaka mafy hifehy ny fampitam-baovao anaty aterineto sy ivelan'ny aterineto ny governemanta Ejipsiana.